QODOBO WAXTAR LEH OO WAXYEELO LEH OO SALIID AH - DAAWADA DADWEYNAHA
Xayawaanka qulubka ah ayaa noo soo bandhigay xiliga xagaaga-xilliga dayrta ee loo yaqaan 'macaan' sida hadiyad ah qaabka boqoshaada quruxda badan - subagga. Waxay u qalmaan si ay u jecel yihiin dadka jecel "ugaadhsiga aamusneed" iyaga oo dhadhan fiican iyo dhalid wanaagsan.
Maslata waxay magaceeda u bixisay sababtoo ah daboolka saliidda leh. Waxay ku koraan kooxo. Dabeecadda, waxaa jira ilaa 50 nooc oo fangaska ah. Cimiladoodu maaha kaliya Eurasia, laakiin sidoo kale Afrika iyo Australia.
Nooca caadiga ah ee uu ku yaalo waxa uu leeyahay qaab muuqaal ah oo leh tubercle taajkii. Waxay tahay midab madow (midabo kala duwan oo ku xiran nooca) midabka maqaarka leh oo si fudud uga soocaya saxarka. Jirka jirka fangaska waa mid casri ah, jilicsan, wuxuu leeyahay midabka jaalaha ah.
Lugta waa cylindrical qaab qaab leh sariirta cad ee ku wareegsan cap, kaas oo soo noqnoqda madow marka uu musqusha ka sareeyo.
Saliiddu waxay ku kori kartaa geedo ama kaymaha isku dhafan. Goynta ayaa dhici doonta bisha Luulyo-Oktoobar. Waxaa jira noocyo aan la dabooli karin. Waxay ku kala duwan yihiin in ay badalaan midabka marka ay jajabanayaan, waxay leeyihiin madow madow iyo lakab casaan ah.
Halabuurka saliidda: Kaloorida, qiimaha nafaqada, fiitamiinada iyo macdanta
Inta badan saliida waxaa ku jira borotiinka - 2.4%, baruurta - 0.7%, karbohidrates - 0.5%, dheefta cuntada - 1.2%, ash - 0.5% iyo biyaha - 83.5%. Waa in la ogaadaa in saliidda kalooriga ay yar tahay. Qiimaha tamarta 100 g ee sheyga waa 19 kcal.
Sidoo kale, boqakooyinkan waxaa ku jira waxyaabo badan oo fitamiino iyo raad raac. Qaybaha kumbuyuutarradu waa boqolkiiba inta qaadashada maalinlaha ah ee jidhka marka la cunayo 100 g oo saliid ah.
Saliidaha waxaa ku jira fitamiino: B1 (1.8%), B2 (14.3%), B6 ​​(15%), B9 (7.5%), D (26%), nicotinic (33%) iyo ascorbic (13.3%)
iyo raad raac waxyaallaha: Potassium (2.4%), silikoon (6.9%), fosfooraska (2.9%), boron (2.1%), cadmium (86%), birta (5.2%), copper (145, 6%), rubidium (225.8%), lead (40%), lacag (35.7%), selenium (10.8%), chromium (10.5%), calcium (96.4%), zinc (116.7%).
Fitamiin kasta oo kasta ayaa ku lug leh fal-celinta redox-ka ee ku dhaca jidhka bini-aadamka, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa hab-nololeedka nidaamka.
Tusaale ahaan, fitamiin B2 waxay ilaalisaa xaaladda caadiga ah ee maqaarka, xuubka xuubka, iyo cillad la'aanta ka jirta xadgudub iftiin iyo aragti furan.
Vitamin B6 waxay ku lug leedahay hawlaha caadiga ah ee habka dhexe ee dareenka, sameynta dhiig iyo maqaarka. Calaamadaha ugu horreeya ee la'aanta fitamiin B6 waa hoos u dhaca cuntada.
Faytamiin C kor u qaadidda difaac, waxay kor u qaaddaa nuugista birta. Faytamiin la'aanta ayaa wax ka tareysa suuska iyo jilicsanaanta xididada dhiigga, taas oo sababa cirridka cirridka iyo sanka.
Qodobo faa'iido leh oo saliid ah
Butters waa wax soo saar leh dhadhan fiican, iyo guud ahaan marka loo isticmaalo karinta. Waxaa loo diyaarin karaa sida aad jeceshahay: la kariyay, la shiilay, la dubay, saliideed, oo lagu daro suxuunta ugu muhiimsan iyo waxyaabaha ugu muhiimsan. Maadaama ay heystaan ​​biyo badan oo ka kooban halabkooda, waa dhif in loo isticmaalo qalajinta.
Waa muhiim! Ka dhig boqoshaada la doorto in ka badan hal sanno.
Waxay kaloo leeyihiin waxyaabo badan oo wanaagsan. Marka hore, borotiin, oo saldhig u ah subag, waa bedel wanaagsan oo suxuunta hilibka ah. Tani waxay muhiim u tahay khudradda. Sidoo kale, boqoshaada waxaa ku jira fiitamiin badan iyo walxaha raadraaca ee loogu talagalay dadka.
Marka labaad, saliiddu waxay ka kooban tahay waxyaabo u gaar ah oo ka caawiya la dagaallanka cudurrada iyo la socoshada shaqada habboon ee jirka. Tusaale ahaan, lecithin - waxay ka hortagtaa sameyska kolestaroolka, aphrodisiacs - wuxuu kordhiyaa maaraynta wuxuuna yareynayaa daal iyo niyadjab, polyphenols iyo tocopherols - waxay muujiyaan dhaqdhaqaaqa antioksidant, citric, succinic iyo fumaric acids waxay muhiim u yihiin metabolismka tamarta, beta-glucan - waxay muujinaysaa saameynta anti-bararka.
Muuqaal muhiim ah ee saliidda, sida dhammaan boqoshaada, waa awooda lagu ururiyo macdanta. Kuwani waa macro-iyo mareeyn, taas oo qiimo leh, laakiin sidoo kale kuwan waa birta culus, Nitrates iyo nitrit, kuwaas oo khatar u ah bani-aadamka.
Ma taqaanaa? In film filimka ah on cap ee fungus ayaa shaaca ka qaaday immunostimulants. Sidaa darteed, marka wax lagu kariyo lagama maarmaan ma aha in laga saaro. Waxay siisaa fungus midab mugdi ah, waxaana lagu talinayaa in laga saaro oo kaliya marka marinating.
Isticmaalka saliidda daawada
Iyada oo ujeedada daaweynta ee cuntada waxaa ka mid ah suxuunta laga sameeyo subag, qaado qaadashada, tinctures iyo budada.
Daawada, rinjiyeyaashu waxay ku daweeyaa gout, xubnaha aragga, cudurrada xasaasiyadda, sonkorowga, cudurada dheef-shiid kiimikaadka, cudurada wadnaha iyo xididada, dareenka dareenka, hababka maskaxda oo yaraada, diiqada daba dheeraatay, niyadjab, awood xoogan, osteoporosis.
Maaddooyinka bayoolojiga firfircoon, kuwaas oo ku jira boletus, waxay leeyihiin antiviral, antitumor, immunomodulatory, saameynta anti-bararka.
Waa muhiim! Si ay boqoshaada u lumiso hantidooda daawada, wakhtiga karinta waa inaanu ka badnaan 10 daqiiqo.
Cilmi-baarayaashu waxay caddeeyeen faa'iidooyinka saliidda ee jirka bini-aadamka. Qaadashada methanol ee fangaskaas waxay sababtaa geerida unugyada kansarka naasaha waxayna xakameysaa kobaca unugyada kansarka ee 'gastric and leukemia'.
Gout, waa lagama maarmaan in la cuno subagga si joogto ah. Waxay ka koobanyihiin xeryo dufan leh oo leh daweyn waxtar leh. Waxaa intaa dheer, xeryahooda ayaa la keydiyaa xitaa marka ay boqoshaada picking.
Marka migraines ay budada u qalalan yihiin.
Ma taqaanaa? Madaxda saliidda la kariyey waxay ku jiraan xaddi badan oo zinc ah. Sidaa darteed, waxaa loo isticmaalaa qaab la qalajiyey si loo dhiso qadar jacayl. Zinc waxay kordhisaa rabitaanka galmada, waxay leedahay saameyn togan oo ah saameynta shahwada iyo bislaanshaha ukunta.
Cilmi-baadhayaashu waxay caddeeyeen in boletus ay leeyihiin antibiyootiko. Sidaa darteed, dabiiciga aqueous waxay saameyn kartaa sida levomycetin, streptomycin.
Faa'iido leh tincture ee saliidCuntadani waa mid sahlan. Boqoshaada cusub ee la jajabiyey waxaa lagu shubay keruub 1-litir, ku shubay vodka iyo ka tagay meel madow 14 maalmood. Ka dib markaa, alaabta ceeriin ah ayaa la duuduubay, tincture ayaa la sifeeyaa.
Qaado 2 jeer maalintii kahor cuntada, faafidda 1 tsp. tincture ee 50 ml oo biyo ah. Tincture wuxuu ka caawiyaa xanuunka qaybaha (si loo isticmaalo dibedda iyo gudaha), madax xanuun, turqo.
Daaweynta cudurka psoriasis, waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo boqoshaada, aan la nadiifinaynin filimyada dhajinta leh, weelka, xir daboolka kabadhada oo ka tag 20 maalmood oo ah meel qabow mug leh. Dareer mug leh, oo la sameeyay, waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo maqaarka cudurka qaba.
Tan iyo miisaankoodu waa cuntooyin yar-yar iyo kalooro badan oo dheef-shiidan, waxay ku caawin karaan miisaanka luminta. Suxuunta laga soo bilaabo boqoshaada muddo dheer dareen macquul ah.
Maaddada kondhomoolajiyada waxay isticmaalaan faleebo saliid ah sida kareemka. Waxay leedahay tufaax, anti-bararka. Budada ka soo fangaska waxaa lagu daraa maaskaro wajiga.
Ka soo qaad saliida loo isticmaalo in lagu dhajiyo tel.
Qodobada halista ah ee saliidda iyo ka hortagga
Waa inaan la iloobin in kuleyliyeyaasha, sida dhammaan boqoshaada, ay yihiin cuntooyin culus. Tani waxay fududeyneysaa burburkii gaabiska ee borotiinka laga helo boqoshaada. Sidoo kale waxaa ku jira foojignimada. Waxay si xun u saameeyaa dheef-shiidka dhammaan cuntooyinka jirka. Sidaa daraadeed, waxay halis u tahay inay qaadato saliid la karkariyo oo tiro badan sababtoo ah sifooyinka waxyeelada leh.
Markaad ururiso likaha, xasuusnoow inay soo saari karaan walxaha shucaac iyo kansarku ka soo baxa ciidda. Sidaa daraadeed, iyaga ka fogee wadooyinka iyo dhirta qashinka qashinka. Iyo ka hor inta aanad karin boqoshaada si fiican u karkariyo.
Kooxaha khatarta ah ee xaddidaadda lagu muujiyay subagga cunidda waxaa ka mid ah:
carruurta (waa mamnuuc!);
haweenka uurka leh;
dadka qaba cudurrada daba-dheer ee habka dheef-shiidka, beerka, beeryarada, kaadiheysta.
Uruurinta shidaalka ee kaynta, waa inaad ka warqabtaa qiimaha nafaqada iyo daaweynta iyo ka hortagga, si ay u isticmaalaan waxtarkooda kaliya waxay ka faa'iideysanayaan jirka.